Iindaba-Umtya we-extrusion wombhobho we-PE
PE multi-umaleko umgca kumbhobho extrusion ungenza 2, 3, 4, 5 maleko imibhobho yi ephambili engundoqo umatshini compound extrusion.
Ukuveliswa kombhobho owahlula-hlulayo, kokukhona izinto zibekiwe, kokukhona izinto zininzi, kunzima ngakumbi ukuvelisa. Maleko ezahlukeneyo ziya kwahluka umahluko. Kwimibhobho emithathu yomaleko, zimbini iintlobo. I-ABA kunye ne-ABC zifuna ezimbini kunye nezintathu ze-extruders ezizodwa ukuba ziphume. Kwizixhobo, i-ABC inzima kakhulu kwaye iindleko zezixhobo ziphezulu kakhulu kune-ABA.
PE multi-maleko umbhobho ubukhulu becala esetyenziselwa unikezelo lwamanzi kamasipala kunye nemijelo, ukunkcenkceshela kwezolimo, njl ngezinto ezahlukeneyo ezidityanisiweyo kunye namanqanaba, inokunciphisa iindleko, inyuse amandla omzimba kwaye inyuse i-antioxidant.
Kuba umgca wemveliso umbhobho edityanisiweyo eqhelekileyo, inkalo inkulu umgca wemveliso umbhobho edityanisiweyo kakuhle ukusebenza eliphezulu kunye ugcino lwamandla. Ngaphantsi kwesiseko somthamo ofanayo we-extrusion, isikrufu sincinci, ukusebenza kwamandla kusezantsi, kwaye indawo kunye nabasebenzi bagcinwa ngakumbi.
Xa kuthelekiswa nexesha elifanayo lexesha elifanayo, imveliso ye-60/30 yesiqhelo ye-extruder eyodwa yi-100kg ngeyure, ngelixa amandla e-extrusion asebenza ngokugqibeleleyo nge-60/38 ephezulu yokusebenza kwe-screw extruder engaphezulu kwama-350 kg ngeyure, elingana nokusebenza ngokukuko kathathu enesiqingatha. Ukusetyenziswa kwamandla ngamaxesha e-2.8 kuphela e-extruder eqhelekileyo, kwaye umyinge wokusetyenziswa kwamandla unyuswe phantse ngama-25%. Ukusetyenziswa kwamandla kuncitshisiwe kakhulu, ukusebenza kwemveliso kulungiselelwe, kwaye indawo yemveliso incitshisiwe kakhulu.
Umgca wemveliso kumbhobho maleko maleko ukuvelisa umbhobho ubukhulu ka 20-1200mm, kunye nokubalulwa eliphezulu-olusebenzayo Screw extruder ikakhulu 50/38, 60/38, 75/38, 90/38120/38150/38. Umthamo we-extrusion yi-200-1200kg / h, kwaye imoto ye-extruder yi-55kw-550kw, ukuze ihlangabezane neemfuno zabathengi ezinobubanzi beepayipi ezahlukeneyo.